ကျွန်ုပ်တို့၏ မညာသောနှလုံးသားဖြင့် တွေ့ရှိချက်
အဲဒီ လက်ရေးဖယောင်းစာအုပ်ကလေးကို ဆရာဆောင်းဝင်းလတ် ဆီက ရထားခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၁ခုနှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကထင်ပါတယ်။ဒီနေရာကနေ ဆရာဆောင်းကို မှတ်မှတ်ရရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by MANORHARY at 3:45 AM2comments
စပယ်ကပိုကရိုနဲ့ ... လှလို့။
ငါ .. တစ်ပွင့်ပြီးတစ်ပွင့်ပြိုလဲ
နှင်း အဆက်ဆက်တိုင်အောင် ကြေကွဲခဲ့ရပေါ့ ။ ။
Posted by MANORHARY at 10:21 PM3comments
ရမ္မက်လွန်ကြိုး၊တင်းလွန်းစွ ... ။ ။
ဒီနေ့ ဖိုးခွား ဆီက သတင်းတစ်ခုရပါတယ်။ ဆရာဗန်းမော်ညိုနွဲ့ ဆုံးပြီတဲ့။ အဲဒါနဲ့ မှတ်စုထဲပါလာတဲ့
သူ့ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို သတိတရတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ .. လို့ ။
Posted by MANORHARY at 2:49 AM2comments
ဒီကော်ဖီခွက်လေး ဆိုတဲ့ ကဗျာတွေကို Idea magazine လ တစ်ရာပြည့်မှာ Poetry Performance အနေနဲ့ သုံးချင်လို့ တောင်းထားခဲ့တာပါ။ လတစ်ရာပြည့်မှာ ထူးထူးခြားခြားလေး လုပ်ချင်လို့ Poetry Performance ကို နှစ်မျိုး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုက ဒီကော်ဖီခွက်ကလေးတွေဖြစ်ပြီး တစ်ခုက ကိုငုအိမ်ထက်မြက် ရဲ့ ကဗျာတွေပါ။ ကော်ဖီခွက်ကလေး လေးမျက်နှာ၊ ကိုငုအိမ်ထက်မြက် ကဗျာလေးပုဒ်ကိုတင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် ကိုငု ကဗျာတွေက တစ်ခါတည်း နတ်ပြည်တက်သွားတာ ပြန်ဆင်းမလာတော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ Performance မှာ ဘက်ပဲ့ ကျန်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ဟာနဲ့သူလှနေတဲ့ ကော်ဖီခွက်ကလေးတွေကိုပဲ ကျွန်မချစ်သော ကဗျာများကနေပဲ တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့ ဒီကနေတင်လဲဆိုတော့ ဒီကဗျာလေးတွေကို စဖတ်ရကတည်းက ကျွန်မချစ်သောကဗျာများ မှာသိမ်းထားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားခဲ့လို့ပါ။
ကဗျာတွေကို ဓါးပြတိုက်တာကို အသာတကြည်ပေးတဲ့ Zephyr ၊ စိတ်ကူးတည့်ရာအတိုင်းဒီဇိုင်းတွေကို တစ်ထပ်တည်းကျအောင်လုပ်ပေးတဲ့ ဒီဇိုင်းဆရာလေး ကိုမျိုး၊ တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကဗျာတွေက Singapore မှာနေထိုင်ပြီး ကျွန်မက Sydney မှာပါ။ ကိုမျိုးက Malaysia မှာဖြစ်ပြီး idea တိုက်က မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံလေးခု မနားတမ်းဆက်သွယ် ဖန်တီးပြီးရလာတဲ့ ရလဒ်လေးဖြစ်လို့လည်း အမှတ်တရပါပဲ။ ဒီဇိုင်းတွေကို psd file နဲ့ resolution အပြည့် မြန်မာပြည်ကိုပို့ရတယ်ဆိုတာတော်တော် မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။ ခုတော့ အောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီ ။ ကိုငုရဲ့ ကဗျာတွေကိုတော့ လွမ်းဆွတ်နေမိပါတယ်။
PS: တစ်မျက်နှာချင်းစီ ကလစ်ခေါက်ပြီး ဖတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကဗျာသီးသန့်စာသားကိုလည်း အောက်မှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့မင်းရော ငါပါ မှောက်ကျခဲ့တယ်နော် ...
တိုးဖျော့တဲ့ သစ်ရွက်ကြွေချိန်လေးတစ်ခု အတိအကျရှိခဲ့တယ် ကော်ဖီခွက်လေးရဲ့ ...
မင်းကို ငါကခေါ်ပေမယ့် ..
အသည်းကွဲနေတဲ့ ကော်ဖီခွက်လေးမင်းက မထူးနိုင်ခဲ့ဘူးလေ ...။ ။
အနည်လေးတွေ ရွေ့နေတယ် ...
ငြိမ်မလိုနဲ့ ရွေ့နေတယ် ...
ငါ မင်းလို စိတ်ရှည်လက်ရှည် အနည်ကျချင်တာကိုလေ ..။
ငါ့စိတ်ကို ဘာနဲ့အုပ်ထားရမလဲ ပြောပြပါလား ...။
တစ်ခုတည်းသောအာရုံမှာ မြဲနေတဲ့ကော်ဖီခွက်လေး ...
မင်းအနားမှာ ငါသိမ်ငယ်လိုက်တာကွာ ...။ ။
ငါတို့ဘ၀ထဲကို ရေနွေးပူလောင်းထည့်ခဲ့သူတွေအတွက် ...
သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့နဲ့ ... ပြုံးပြလိုက်ကြစို့ကွယ် ...
ငါတို့အတူ ခမ်းနားကြစို့ကွယ် ....။
ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးရေးမူအရ ...
နေ၀င်သွားပြန်ပြီ ... ။ ။
မငိုနဲ့လေ ..ကော်ဖီခွက်လေးရဲ့ ..
ဘာလို့ ဒီလောက်တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးတာလဲ ...
ကော်ဖီခွက်လေးနဲ့အတူ အိပ်စက်ခြင်းကို တစိမ်းဆန်ပစ်လိုက်ရတယ် ....။ ။
ကော်ဖီသောက်ခြင်းဟာ အနုပညာမဟုတ်တော့ဘူးကွဲ့ ...။
ကော်ဖီမှုန့်ရယ် သကြားရယ် ရေနွေးရယ် မင်းရင်ဘတ်ထဲမှာ ကော်ဖီဖြစ်သွားသလို
အလွမ်းရယ် ခါးသက်မှုရယ် အယောနိသောမနသီကာရရယ် ငါ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ ကဗျာ ဖြစ်လာဖို့ကောင်းတယ် ...။
မင်းက ငါ့ကို ငေးရီကြည့်နေသလို ..
ငါကမင်းကို နာကျင်ချစ်မက်စွာ ကြည့်နေချင်တယ် ...
မင်းက ငါ့ကိုနွေးထွေးစေသလို ..
ငါက မင်းကို ငါ့သွေးကြောတွေထဲမှာ လုံခြုံနွေးထွေးစေချင်တာ ...
မင်းက ငါ့ကို ကဖိန်းဓာတ်ပေးသလို ..
ငါကမင်းကို Platonic Love ပေးချင်တာ ...၊
မင်းက ငါ့ကို ပြုံးပြတဲ့အခါ
ငါကမင်းကို နှလုံးခုန်သံနဲ့ပြန်ပြုံးပြချင်တာ ကော်ဖီခွက်လေးရဲ့ ...။
မင်းငါ့ကို နားလည်စွာ ခါးသက်ပေးပါ ...။
မင်းငါ့ကို နားလည်စွာ ခါးသက်ပေးပါ ....၊
ကမ္ဘာကြီးဆန်ချင်တာနဲ့ နှလုံးသားရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံရေလွှမ်းခံလိုက်မိတယ်တဲ့ ...
ငါတို့တွေဟာ ရေလွှမ်းခံချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာ ...
Standing in the cold rain, feeling likeaclown ..... ။ ။
ငါ့မှာမာယာ နည်းနည်းရှိတယ် .. ကော်ဖီခွက်လေးရယ် ...
လင်းနေတဲ့ အနက်ရောင်တွေ ငါပိုင်ဆိုင်တယ် ...
ပရီးမီးဟား2plus 1 ကို
Espresso ထက်ကြိုက်မိတာ ..
မင်းနဲ့ ငါ့ကြားကနားလည်မှုပါ ...။
မင်းသိမှာပါ ကော်ဖီခွက်လေးရယ် ..
သူက ခြေရာလက်ရာမကျန်ခဲ့ချင်ဘူးတဲ့ ...
ငါ့ဘယ်ဘက်ရင်အုံမှာ တစ်ရှူးနံ့နည်းနည်းရတယ် ....။
ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်ရအောင် ကော်ဖီခွက်လေးရယ် ...
သူ၊ ကလေး တစ်ယောက်လို အိပ်နေလိမ့်မလဲ ...။
ငါ့သက္ကရာဇ် ရက်လွန်စာစောင်အတွက် ...
မင်းနဲ့ငါ ဘာမှမပြောဘဲ တိတ်တိတ်လေးထိုင်နေလိုက်ကြစို့လေ ...
အဲဒီ ဆိတ်ငြိမ်မှုကို အေးနေတဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ခြေဖျားလေးနွေးရုံ ... ငါတို့စိတ်နဲ့ပို့ပေးလိုက်ကြရအောင် ...။ ။
ကော်ဖီခွက်လေးက ငါ့ကို နှိုးတယ် ..
ရုံးမှာ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါ ..
ကော်ဖီခွက်လေးက ငါ့ကိုရယ်စရာမောစရာပြောတယ် ..
ကော်ဖီခွက်လေးက ငါ့ကိုဆေးသောက်ဖို့သတိပေးတယ် ..
ကော်ဖီခွက်လေးက ဘေးမှာငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေတယ် ...
ကော်ဖီခွက်လေးက ရိုရိုသေသေ လိုက်နာနေတယ် ...
ကော်ဖီခွက်လေးက တည်ကြည်လေးနက်နေတယ် ...
ကော်ဖီခွက်လေး ငါ့အနီးမှာ ..
ကော်ဖီခွက်လေး လက်တကမ်းမှာ ...
ကော်ဖီခွက်လေးကွဲသွားပြီ ... ။ ။
Posted by MANORHARY at 2:07 AM 12 comments
Labels: Poetry Performance
ဟော !!! ငါရောက်လာပါပြီ
လာပါပြီ၊ ငါရောက် ...
ကြက်ဆူပင်၊ ကြက်ဆူပင်များစွာ ... များစွာ
(လံကွတ်တီ (ပေါ)-လိင်ဃောဓိ (ပါ)
-လိင်ဖုံးအဝတ်) ... လို့
* ရုရှားကဗျာဆရာ "မာယာကော့ဖ်စကီး" ရေးတဲ့
"ဘောင်းဘီဝတ်မိုးတိမ်" ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာ့ဂန္တဝင်
လောက - ဆိုတဲ့
မောင်သီဟ ... မှာ
ကြေကွဲ၊ ဆေးချဘဝသံသရာ၊ တေးဘုမ္မာ
ဒါဟာ ... အချစ်တဲ့
ချစ်သူဟာ ... ဒီမှာ
တိုးသဲ့ ... သာသာ။
ချစ်ခြင်းလာ - နေရှိန်ထိုး
(မောင်သီဟ - ကတော့မိုးပျံပူဖေါင်းတလုံးလို
ကြိုးပြတ် ... ... ... ... ...)
(ဂ) အားပါးပါး ...
... ... ... ခဲ့
... ... ... ခဲ့ဖူး
... ... ... ခဲ့ဖူးရဲ့ (ရှက်ဖွယ်)
ကောင်းကင်ရော .. မြေပြင်ကိုပါ
စွန့်ခဲ့တာမဟုတ် - စွန့်ခဲ့ရတာသာဖြစ်တယ်)။
စပါးလုံး - အမုန်းလည်းပါရဲ့။
စက်ချေး - လူမှုရေးနဲ့ငွေကြေး အြွေကးလည်းပါ။
အား ... တကယ်သနားစရာ
(ဒါပေမယ့် ငါက ဘာတုန်း)
ဘုရားအဆူပေါင်းများစွာ ... များစွာ
@ x ÷ ကောင်းကင်ကြီးဟာ ... ပြာလို့။
+ ? x x မနက်ခင်းမှာ
=> o Ø ငှက်များလူးလွင့်မြူးပျံ
"ဥုံ ... ဖွ"
ဆရာ "မာယာကော့ဖ်စကီး" ဟာ
အလို ... ကောင်းကင်ကြီးငဲ့
... ဒင်းဟာ (ကင်းကောင်ကြီးဟာ)
ကျန်တဲ့တဖက်ကိုခြုံ - လုံအောင်ဖိပိတ်
(အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတော့တယ် ...)။ ။
"ဤစာအုပ်ပါအရာအားလုံး အမှားများလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်" Richard Bach (The Illusions ... မှ)
တင်မင်းထက် ရဲ့ ရွှေဝါပြည် ကနေ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။
၁၉၉၃ ဆိုတာ ကျွန်မတို့ ကျောင်းထဲမှာ ကဗျာတွေအားနဲ့မာန်နဲ့ရေးနေတဲ့ကာလပေါ့။
ဒီစာအုပ်လေးကိုတော့ မဖတ်ဖူးခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီနာမည်နဲ့ ကိုသီဟအကြောင်းကို
တော့ ကျွန်မတို့ ကြားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ တင်မင်းထက်ပြောသလို မှန်စာလို လက်မှတ်မျိုး
ထိုးတတ်တာက အစပေါ့ ..။ခု ဒီကဗျာလေးကို ကျွန်မချစ်သောကဗျာများ ... မှာ ......
ပြန်လည်ဖော်ပြဖို့ တင်မင်းထက်ဆီခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် သက်ဆိုင်သူ
Posted by MANORHARY at 11:34 PM2comments
Labels: မောင်သီဟ (ဟိန်းသစ်ရည်သိမ်း)
ခုတလော စိတ်နဲ့တွေ့နေတဲ့ စိတ်ဖွဲ့ကဗျာတချို့ပါ။
အခု .. ခင်ဗျားအလှည့်ရောက်ပြီ။ ။
သွေးစိမ်းရှင်ရှင်ပန်းထွက်ပေရော့ ။ ။
Posted by MANORHARY at 2:10 AM2comments
အခုထိအရသာ ရှိတုန်းပဲ။ ။
၃၄" x ၄၂"
(သုခမိန်လှိုင်ရဲ့ အမည်မရှိရေတံခွန်ကဗျာတင်ဆက်မှု ဖြစ်ပါတယ်။)
Posted by MANORHARY at 4:20 AM2comments
ဒါပေမယ့် ကိုရဲကိုတွေ့ရပြန်တော့လည်း ကိုရဲက
ဒီတော့ ခဏတော့ အိပ်မှဖြစ်မယ်
ဖားတွေအော်နေကြလည်း မိုးတွင်းဆိုတဲ့အသိနဲ့ မအိပ်တဲ့သူမှမရှိပဲမေမေ
နာခံတတ်ရင်တော့ ဒါဟာလည်းဂီတ တစ်မျိုးပေါ့..အနုပညာတော့ရှိရလိမ့်မယ်
ဇီးကွက်တွေ ဒီးဒုတ်တွေလိုပဲ ညညကျအစာရှာထွက် ကိုယ့်နာမည်ကိုယ်အော်တတ်တဲ့တစ္ဆေ
ဝံပုလွေတွေမှာ အဆိပ်မရှိတော့ မြွေတွေလောက်အန္တရယ်မရှိဘူးလို့မထင်ပါနဲ့
သူတို့မှာ အစွယ်ဖွေးဖွေးတွေနဲ့ ခြေထောက်ကလေးချောင်းရှိတယ်
ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ အကြာကြီး တေးသွားတစ်ခုကိုထပ်တလဲလဲမဆိုနိုင်ပါဘူးမေမေ
လရောင်တွေ ဖြာဆင်းနေပုံကတော့.. လှလိုက်တာ
အိပ်စက်ပစ်ရမှာ နှမျောစရာကြီး…မေမေ.. ဒါပေမယ့်
လူတကာရဲ့လက်ညှိုးနဲ့ ညှိုးရော်သွားမယ့် ပန်းကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးမေမေ
အဲဒါ John Lenon ရဲ့ Imagine ပါ..ဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်မယ့်ကမ္ဘာလေ
ဟော ..မေမေ..ခြေသံတွေကြားတယ် …သမီးအိပ်တော့မယ်မေမေ
သူတို့က အခန်း ၅၀၀ ဆီကိုဦးတည်သွားနေကြတာပါ..
အဲဒီမှာ အလင်းမပါတဲ့ အသိတရားတွေရှိတယ်
သေးသိမ် နုံနဲ့တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ မှောင်မိုက်နေတဲ့ အခန်းလေးပေါ့မေမေ
ခဏတာမင်းသား ဘဝ သူတို့ရကြပါစေလား…
သမီးကတော့ ခန္တီစတရားတွေကို ယဉ်ပါးအောင်သင်ယူလာခဲ့တာနှစ်တွေကြခဲ့ပြီပဲ..
နိုးလာရင်… ဥပက္ခာတရားတွေ ရှိရာလည်း ခရီးထွက်ရဦးမယ်
အမနာပ တံတွေးစက်တွေ အကြောင်းလည်းခဏတော့မေ့ထားဦးမှဖြစ်မှာ
ဒါမှ သမီးခဏလောက် အိပ်လို့ရမှာ…
Posted by MANORHARY at 7:55 PM3comments
ပုံက ပန်ဒိုရာ အမှတ်တရ ဆွဲထားတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ တချိန်က နှစ်သက်မိခဲ့တဲ့ လယ်သမား ကြီးကိုပြန်ရှာတွေ့လို့ လယ်သူမ နဲ့ ပြန်လည်ပေါင်းဖက်ပေးလိုက်တာပါ ။
မြတ်နိုးခွင့် ကို လိမ်ကျစ်ထုတ်ပိုးရင်း
Posted by MANORHARY at 7:02 PM5comments
အိန္ဒြာ စုထားတဲ့ငါးတွေကို ပြတိုက်ကနေ ကော်ပီပွားလာခဲ့တာပါ။ အမှတ်တရအနေနဲ့ ကျွန်မချစ်တဲ့ကဗျာတွေနဲ့အတူ မှတ်တမ်းတင်ထားဖြစ်ပါတယ်။
Posted by MANORHARY at 7:46 AM3comments
နှုတ်ခမ်းထက် ပီယဝါစာက နှလုံးသားကို တစစီ ဖဲ့ခြွေတယ်
(အချစ်ရယ် ငါ့ရင်ထဲ ဇန်နဝါရီပန်းတွေပွင့်တယ်)
မျှော်လင့်ချက် မီးညွန့်မီးတောက်လေး အရေးတယူ ထွန်းညှိပြန်တော့
ဖယောင်းတိုင်လို နူးညံ့မှုက တောက်လောင်ခြင်းကို တတိတိ ငြိမ်းစေတယ်
(အချစ်ရယ် ငါ့ရင်ထဲ ဖေဖော်ဝါရီပန်းတွေ ပွင့်တယ်)
လွမ်းမောမှုနဲ့ ကြေကွဲခြင်းသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖွဲ့ဆိုဖို့ ကြိုးစားတော့
သံစဉ်က နာကျင်မှုကို အလိုလို ရှုံးနိမ့်စေတယ်
(အချစ်ရယ် ငါ့ရင်ထဲ မတ်လပန်းတွေ ပွင့်တယ်)
ချစ်ခြင်းနဲ့ပကာသနအကြောင်း ရူပါရုံပေါ်တင်ပြီး ဖြန့်ခင်းကြည့်တော့
စက္ခုအာရုံက မျက်စိရှေ့မှာ တိတိကျကျ ဝေ၀ါးသွားတယ်
(အချစ်ရယ် ငါ့ရင်ထဲ ဧပြီပန်းတွေပွင့်တယ်)
ထပ်တူမပြုနိုင်ကြောင်း ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်က အခြေအတင် ငြင်းခုံတယ်
(အချစ်ရယ် ငါ့ရင်ထဲ မေလပန်းတွေ ပွင့်တယ်)
တရားဝင်တိကျမှုမရှိတဲ့ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းက ယုံကြည်ချက်ကို ထွေပြားတယ်
(အချစ်ရယ် ငါ့ရင်ထဲ ဇွန်ပန်းတွေ ပွင့်တယ်)
ခတ္တာတွေမြူးမယ့် မိုးတစ်နေ့ကို စောင့်ကြိုတော့
ခံနိုင်ရည်နဲ့လယ်တောလေး ထွန်ရေးအထပ်ထပ် ရေးခြစ်ခံရတယ်
(အချစ်ရယ် ငါ့ရင်ထဲ ဇူလိုင်ပန်းတွေ ပွင့်တယ်)
မိုးရာသီက မျက်ဝန်းအိမ်ပေါ် ရုတ်တရက် ရွာချလာတယ်
(အချစ်ရယ် ငါ့ရင်ထဲ ဩဂုတ်ပန်းတွေ ပွင့်တယ်)
ခြေရာပေါ် စုတ်ချက်မပီဒဏ်ရာစတွေ လာလာကပ်ငြိတယ်
(အချစ်ရယ် ငါ့ရင်ထဲ စက်တင်ဘာပန်းတွေ ပွင့်တယ်)
ကြည်နူးမှုတေးသွားတွေ မေ့ဖျောက်ဖို့ ကြိုးစားပြန်တော့
ခြေချင်းလိမ်လက်သည်းချက်က ကျောပြင်ပေါ် မိုးသားတွေလို အုံ့ဆိုင်းတယ်
(အချစ်ရယ် ငါ့ရင်ထဲ အောက်တိုဘာပန်းတွေ ပွင့်တယ်)
တစ်ကိုယ်စာအခန်းလေးထဲ ပုံရိပ်တွေ သွန်ချကြည့်တော့
အတိတ်ကနှင်းစက်တွေဟာ အထီးကျန်အေးစက်မှုကို ဗလောင်ဆူစေတယ်
(အချစ်ရယ် ငါ့ရင်ထဲ နိုဝင်ဘာပန်းတွေ ပွင့်တယ်)
ဖလက်တံမဲ့ ဂစ်တာဟောင်းလေးဘဝ ကြိုးညှိကြည့်တော့
ကံကြမ္မာက တို့နှစ်ဦးကြား "ထာဝရ မဆုံဆည်းနိုင်ကြောင်း" တေးတစ်ပုဒ်လက်ဆောင်ပေးတယ်
(အချစ်ရယ် ငါ့ရင်ထဲ ဒီဇင်ဘာပန်းတွေ ပွင့်တယ်)
ဒီလို ခေါ်ဆိုရလွယ်ကူသလောက် ဖွင့်ဆိုရခက်တဲ့ ပညတ်ချက်တွေထဲမှာ
အချစ်ရယ် ...ငါမမြင်ရာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပုန်းကွယ်မနေပါနဲ့
ငါကိုယ်တိုင် ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ပန်းတွေနဲ့ မင်းကို ပန်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ။
2002 Nov , Idea Magazine
ဒီကဗျာကိုရေးခဲ့တဲ့ကာလက မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ကျွန်တော် ထဲထဲဝင်ဝင်
ရေးသားနေချိန်ပါ။ အစက ဒီကဗျာကို ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်းပို့ဖို့ စိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့်
ရယ်စရာမှာ ဖော်ပြနေတာတွေနဲ့ မကိုက်ညီတာကြောင့် အိုင်ဒီယာမဂ္ဂဇင်းပဲ
ပို့လိုက်ပါတယ်။ အယ်ဒီတာတွေက မဟေသီ ဦးခင်မောင်မြင့်နဲ့
ဒုက္ခကို စွန့်ပစ်ချင်သူ လူငယ်လေးတစ်ဦးပါ
မေတ္တာကို ပေးဆပ်ချင်သူ လူငယ်လေးတစ်ဦးပါ
မြားကို ချစ်ခြင်းတရားဆီ အထပ်ထပ်ပစ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ။
2009 April, Tharaphu Magazine
၂၀ဝ၃ ခုနှစ် အကုန်လောက်ကတည်းက ကျွန်တော် ကဗျာမရေးဖြစ်ခဲ့ဘဲ
ဒီဇိုင်းဘက်မှာ အာရုံစိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂၀ဝ၉ အဝင်ရောက်တော့
ဘယ်ကဘယ်လို အာရုံဝင်လာတယ် မသိဘူး၊ ပထမဆုံး ဒီကဗျာရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ သရဖူက
ကိုရဲဆီကို ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကိုရဲက ကျွန်တော် ကဗျာရေးဖြစ်တာကို
အံ့ဩတကြီး ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီကဗျာကိုပဲ သူ့မဂ္ဂဇင်းမှာ အမြန်ဆုံးဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။
"တိုးနှောင်မိုးနဲ့ အရက်ဆိုင်မှာ တစ်နာရီ"
ဒါတွေဟာ အရေးတကြီးကိစ္စ မဟုတ်ဘူး
ဒါပြီးတော့ ဒါ ဒီလို ဒါ
ဒါတွေဟာ အမှန်တရား၊ ဒါတွေဟာ ကွန်ဆာဗေးတစ်
ဟေ့ကောင် ဒီအကြောင်းဆွေးနွေးလာတာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု ကျော်ပြီ
မင်းမှာလည်း သားတွေ သမီးတွေနဲ့၊ ငါမှာတော့ တစ်ကောင်ြွကက်၊ အူယားဖားယား
ဒါတွေကို ဝါးပစ်လိုက်၊ ဒါတွေကို မီးရှို့ပစ်လိုက်၊ ဒါတွေကို ဝိုက်ပစ်လိုက်
ဘဝမှာ အတိုးချည်းမှန်းလို့ မရဘူး၊ အရင်းပါ ပြုတ်သွားမယ် ကိုယ့်လူ
ကမ္ဘာမှာ စီးပွားရေးကပ်ဆိုက်နေတယ်၊ ငါတို့မန်ယူကြီးရဲ့အဖေခေါ်စရာ
ဒါပေမယ့် ငါ့လို ဘာမှ မရှိသူအတွက် ဆိုက်စရာကပ် မရှိ
ဒါပြီးတော့ ဒါ ဒီလို ဒါ၊ ဒါတွေဟာ အရေးတကြီးကိစ္စ မဟုတ်ဘူး
ငါကြောက်နေတယ် ကြောက်တယ် ကြောက်တယ် ကဗျာကပ်ဆိုက်မှာ ကြောက်တယ်
ဘဝမှာ ကဗျာသာ မရှိရင် နေရင်းထိုင်ရင်း ငါ့အမေပါ မုဆိုးမ ဖြစ်သွားမယ်
အဖေနဲ့ မတည့်တဲ့နောက်ပိုင်း ငါက ကဗျာကို အဖေလို ကိုးကွယ်တာကွ၊ ဟုတ်လား၊
မင်းလည်း ကဗျာရေးဦး၊ ကဗျာမရေးသူ ဒို့ရန်သူ
ဒီလို ငါ့မူဝါဒနဲ့ ငါငတ်နေတာ ဆယ်နှစ်၊ အခု အိမ်ပေါင်ထားတယ်၊ အခု
ဒါတွေဟာ ကွန်ဆာဗေးတစ်၊ ဒါတွေဟာ အမှန်တရား
ငါက မူးလာရင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းကိစ္စ မပါလို့ မပြီးဘူးကွ၊ နေဦး အပေါ့သွားလိုက်ဦးမယ်
လောကကြီးမှာ သမ္မတဖြစ်ချင်တာလောက် ရူးတဲ့ရောဂါ မရှိဘူး၊ ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးနေ
ဟုတ်တယ် အခု အိုဘားမားလည်း ရေတွင်းပျက်ကြီး ဆယ်ယူဖို့ ကြိုးစားနေတယ်
ဒုက္ခတရားကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ပြည်သူသန်းပေါင်းများစွာ မဲဆွယ်ခဲ့ရ၊ မက်လုံးပေးခဲ့ရ
ဒါတွေဟာ အရေးတကြီးကိစ္စ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပြီးတော့ ဒါ ဒီလို ဒါ
ဟာ မင်းနဲ့ငါလည်း တစ်နေ့တစ်နေ့ "သမ္မတ" ပဲ ရောက်နေ၊ အရက်ဆိုင် နာမည်ကွ
လက်ဖက်ကောင်းစားချင်ရင် ပလောင်တောင်တက် နှေးရတယ်
ဟုတ်တာပေါ့ မင်းက ဒါကြောင့်မို့ ခြောက်နှစ်ပြည့်မှ ကဗျာတစ်ပုဒ်ပဲရေးတာ
ငါ အခု ကဗျာရေးလို့မရဘူး၊
ဝိုင်ချိုလို အသည်းကွဲကဗျာရေးဖို့ ရည်းစားတွေအများကြီး ထည်လဲမဝတ်တတ်ဘူး
အောင်ရင်ငြိမ်းလည်း ကဗျာဝဲဩဃကြီးထဲမှာ ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝေတုန်းလား
ဒီကောင့်ကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းပြဿနာအကြောင်း ကောင်းကောင်းရှင်းပြရဦးမယ်၊
နေဦး ငါ အပေါ့သွားလိုက်ဦးမယ်
တီကျူးကို လှမ်းခေါ်လိုက်၊ ကဗျာမှာ သမ္မတဖြစ်ချင်ရင် "သမ္မတ"ကို လာခဲ့လို့ ခေါ်လိုက်
အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ မင်းရှာနေတဲ့ မာစတာပိစ် တွေ့ပြီလားလို့ မေးလိုက်
မင်းနဲ့ မတွေ့တော့တဲ့ နောက်ပိုင်း ငါမှာလည်း တွေ့စရာ
ဒါတွေဟာ အမှန်တရား၊ ဒါတွေဟာ ကွန်ဆာဗေးတစ် ...အေ့ဟ်
ငါ့မှာ ပိုက်ဆံ မပါဘူး၊ မင်း တစ်ပိုင်းလောက် ထပ်ဆွဲပေးဦး
တောင်တွင်းရှင်ငြိမ်းမယ်ရဲ့ အိုင်ချင်းလေးနဲ့ပဲ အမြည်းလုပ်ကြတာပေါ့ကွာ
တော်တော့ကွာ၊ တော်ပြီ မင်းလည်း မှန်နေပြီ၊ ငါလည်း ရေချိန်ကိုက်နေပြီ
ငါတို့ ဒီအကြောင်း ကဗျာရေးမယ်
ဦးတည်ချက်မရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကဗျာရေးလို့ဖြစ်ပါ့မလား
စိတ်ချ ရတယ် မင်းတို့ငါတို့လိုပဲ စကားလုံးတွေလည်း မူးတတ်ပါတယ်ကွာ။ ။
သူငယ်ချင်း တိုးနှောင်မိုးနဲ့က ၂၀ဝ၁ ခုနှစ်၊ အမေလူထုဒေါ်အမာမွေးနေ့မှာ
စတွေ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက ဆရာအောင်ဝေးနဲ့ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေတို့က
arrangement တွေပေါ့။ တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း သူနဲ့ ကျွန်တော်
ပုလင်းတူဗူးစို့နဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတယ်။ ဖြတ်သန်းပြီး
(memorandom collection မှာပါပါတယ်)
ဝိုင်ချိုနဲ့ကျွန်တော် ရင်းနှီးမှုက ၂၀ဝ၄ ခုနှစ်ကတည်းကလို့ ပြောရမှာပါ။
အဲဒီတုန်းက သူက မုံရွာတက္ကသိုလ်မှာ သင်္ချာအထူးပြုနဲ့ တက်နေသူ။ ကျွန်တော်က
မုံရွာဂျီတီအိုင်မှာ အီးပီနဲ့တက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က
ဂျီတီအိုင်ပရဝုဏ်အတွင်း အပျော်တမ်းကဗျာစာအုပ် လုပ်နေချိန်၊ သူတို့ကလည်း
အပျော်တမ်းကဗျာဆရာကြီးတွေပေါ့။ သူနဲ့တွဲထုတ်တဲ့ ဖီးနစ်(မြန်မာစာ)ဆိုတာက
ကျွန်တော်တို့ State ထွက်တွေလေ။ အဲဒီ သူငယ်ချင်းပေါင်းကူးနဲ့ပဲ မူးခြင်း
အနုပညာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကျောင်းပြီးလို့ ကျွန်တော်
မင်္ဂလာဒုံလေယာဉ်ကွင်းမှာ Field ဆင်းတော့ သူနဲ့ပြန်ဆုံတာ အခုချိန်ထိ
"နွယ်စိမ်းဝေနဲ့ အရက်ဆိုင်မှာ မိနစ်ကိုးဆယ်"
မိုးတွေလည်း ညို့လာပြီ၊ လေပြင်းလည်း ဝေ့လာပြီ
ရာသီက အခြေအနေ သိပ်မဟန်ဘူး
ဒီည ငါ နည်းနည်းကစ်ချင်တယ် ...သယ်ဂျင်း
ငါ့သယ်ဂျင်း အယ်ဒီတာတွေ ကျန်းမာပါရဲ့လား
ဘယ်မဂ္ဂဇင်းက တစ်လ ပေါင်ဘယ်နှသန်းပေးပြီး ခေါ်နေပြီလဲ
ရော့ ဒီမှာ အကောင်းစား ဝိုင်၊
ရော့ ဒီမှာ အပေါစား ဖက်ကြမ်း၊
မော့ချလိုက်၊ ရှိုက်သွင်းလိုက်၊ ခံစားချက်တွေ မှုတ်ထုတ်လိုက်၊
ဘောလုံးစကားနဲ့ ပြောရရင် မင်းတို့မှာလည်း ကွင်းပဲ လဲကန်နေ
ကမ္ဘာ့စီးပွားကပ်ဆိုက်လို့ မင်းတို့ လစာတွေ တိုးမလာဘူးတဲ့လား၊ ခွင့်လွှတ်လိုက်
သူဌေးရဲ့ ငြီးသံထဲမှာ မင်းတို့ သမ္ဘာတွေ တန်းဆင်းဇုန် ရောက်သွားပြီလား၊
မိသားစုရဲ့ရှင်သန်မှုမှာ မင်းတို့ကဗျာတွေ နပ်မှန်ပါရဲ့လား၊ ခွင့်လွှတ်လိုက်
ငါမှာလည်း တောင်ထိပ်မှာပွင့်တဲ့အငူ၊ ငူတူတူ ငေးတေးတေး ငိုင်တိုင်တိုင်
အနုပညာကုန်းတက်ကုန်းဆင်းမှာ ငါ့ ပါပလစ်ကာ ကားလေးလည်း ဂီယာ သိပ်မမှန်တော့ဘူး
အနံ့အသက်တွေ၊ အကြွင်းအကျန်တွေ အခု
ဂါဇာကမ်းမြှောင်မှာ လူမဖြစ်တာပဲ ကျေးဇူးတင်ရမယ်
သီရိလင်္ကာမှာ စစ်သားမဖြစ်တာပဲ ဂုဏ်ယူရမယ်
ကမ္ဘာကြီးလည်း တစ်ခါတစ်ခါ ဝမ်းဖောဝမ်းရောင်၊ တစ်ခါတစ်ခါ ပိုလီယိုစွဲနေ
ကလေးတွေ တစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်တိုက်သလို ကမ္ဘာကြီးကိုလည်း
ခံစားချက်တော့ လျော့မသွားဘူး ... သယ်ဂျင်း
ဒီအချိန် မွန့်ခ်ျရှိနေရင် အရင်လို ဆက်လက်အော်နိုင်ပါဦးမလား
ကဗျာဆရာတွေ ကျပ်တည်းလွန်းလို့ ကဗျာဆရာဒုက္ခသည်စခန်းရှိရင်ကောင်းမယ်
"မလိုဘူး ...မလိုဘူး ...ကိုယ်ထင်ရင် ခုတင်ရွှေနန်းချည်းပဲကွ" ငါ့ကို
ကြည်ဇော်အေးရော အခုအချိန်ထိ "ဇေ" ပဲလား၊
"သူအားကျခဲ့တဲ့ ယန်းပေါလ်ဆတ်က အပေါစားအရက် မသောက်ဘူးတဲ့ကွ"
ပြောသာပြောရ၊ သူ့အရပ်နှင့်သူ့ဇာတ်မှာတော့ ကေမျိုးငြိမ်းလည်း ဝိတ်တက်မလာဘူး
တိုးနှောင်မိုးလည်း ရှိရင်းစွဲ ၂၃၀ အောက် ပေါင် ၅၀ တိတိ လျော့ကျသွား
တီကျူးလည်း ခံစားချက်တွေများလွန်းလို့ အနုပညာ ချောင်းဆိုးသွေးပါခဲ့ပြီ
အောင်ရင်ငြိမ်း အခုချိန်ထိ ကဗျာခေါင်မိုး တက်ဖာနေတာ မိုးယိုပေါက်လုံပါပြီတဲ့လား
ဂျိုလီရေ ဝိုင်ချိုလို မြန်မာပြည်သားကဗျာဆရာတစ်ယောက်ယောက်ကို
ရူးချင်သလို ရူးကြ၊ မူးချင်သလို မူးကြ
ရော့ ဒီမှာ အပေါစား ဖက်ကြမ်း၊ ရှူသွင်းလိုက်၊ မှုတ်ထုတ်လိုက်
ငါကတော့ ငါတို့ကဗျာတွေ သင်္ဘောပေါ်တင်ဆောင်ပြီး ဆိုမာလီသွားချင်တယ်၊
မြန်မာကဗျာတွေ ကမ္ဘာကသိအောင် ပြန်ပေးဆွဲလိုက်ကြစမ်းပါဗျာ
ပြီးတော့ ကမ္ဘာကို စိန်ခေါ်မယ်၊
သွေးရိုးသားရိုး ပြောရရင် ပိုပြီးတော့ အရေးတကြီး
ကြုံတုန်း၊ နောက်ဆုံးစကားတစ်ခွန်းပဲ ပြောလိုက်ချင်တယ်ကွာ
"ဒေါ်လာဈေးတွေ ထိုးကျတိုင်း ပါချီပါချက်စာမူခလေးတော့ လျှော့မပစ်လိုက်ပါနဲ့
သယ်ဂျင်း = သူငယ်ချင်း(လျှာဖျားဖြင့် အမြန်ခေါ်ခြင်း)
နွယ်ကြီးနဲ့ ကျွန်တော် စတွေ့တာက တိုးနှောင်မိုးနဲ့ ကာလအတူတူပဲ။ ၂၀ဝ၁
ခုနှစ်၊ အမေမာမွေးနေ့ ကဗျာရွတ်ပွဲမှာပါ။ အဲဒီတုန်းက သူ့ပုံစံက
သလို ကဗျာရွတ်ရာမှာ အသံတွေ၊ ဌာန်တွေ အရမ်းကောင်းနေတော့ ရုတ်တရက်
ရင်းနှီးရမှာ ခပ်လန့်လန့်ပဲ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းပေါင်းကြည့်တော့
မင်းသားလည်းမခံနိုင်၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ လူကြမ်းလက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည်
ပြရတော့တာပေါ့။ သူ ပြင်ဦးလွင်ကနေ ရန်ကုန်ရောက်တိုင်း ဝိုင်တွေယူယူလာ
ပြီး ကျွန်တော်တို့နဲ့နှစ်ပါးသွားနေကျ။ တစ်ခါတရံ ဘလက်လေဘယ်ဥပဒိရုပ်နဲ့
ဇေကိုကစ်ရတော့တာပဲ။ သူက သူငယ်ချင်းတွေကို အရမ်းကိုယ်ချင်းစာတတ်တာလေ။
"အောင်ရင်ငြိမ်းနဲ့ အရက်ဆိုင်မှာ မိနစ်သုံးဆယ်"
အတွေ့အကြုံအရ ငါ့ကို သွေးတိုးလာမစမ်းနဲ့
ငါက အောင်ပွဲရပြီးရင် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေတတ်တဲ့ အောင်ရင်ငြိမ်း
စကားကို အရှည်ကြီး မပြောချင်ဘူး၊ ငါတို့ အခု ကဗျာတိုက်ပွဲ ဝင်မယ်၊
အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်၊ လူငယ်ကဗျာဆရာပီပီ လူငယ်ကဗျာသွေးကို ပြကြပါ
ဟေ့ကောင် ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ပက်သုံးပက်လောက် ဆက်ထည့်ဦး
မပိုင်ဘဲ ခြင်ရိုက်တဲ့ကောင်တွေကို မုန်းတယ်
လှေကားကို တစ်ထစ်ချင်း မတက်ဘဲ ခါးလယ်လက်ရန်းက ကျော်တက်သူကိုမုန်းတယ်
အုတ်မြစ် မရှိဘဲ ဘယ်အဆောက်အဦက ခိုင်မလဲကွ
ငါတို့က ရေသောက်မြစ်ကို ကြည့်တာ၊ ကိုင်းကူးပြီး ရှင်သန်လာတဲ့သစ်ပင် မဟုတ်ဘူး
တစ်နေ့ရွှေ တစ်နေ့ငွေ ရနိုးနိုးနဲ့ ဖိုထိုးနေတာမဟုတ်ဘူး
တစ်နေ့တစ်လုံးကျဥတဲ့ ဘဲငန်းကြီးလည်း ရိုက်သတ်ချက်မစားဘူး
အရှိကို အရှိတရားအတိုင်း ဆက်လက်ရှင်သန်မယ်
မလိုအပ်တဲ့ အပိုဆာဒါးဟင်းချိုတွေကို မှောက်ပစ်မယ်
ခံစားချက်သာမရှိရင် ဒီကဗျာကို ဖက်တွယ်နေမှာ မဟုတ်ဘူး၊ အငတ်ခံပြီး ချစ်မနေဘူး
ကဗျာမှာ သားကွဲ မယားတကွဲ၊ လင်းကွင်းတစ်ဘက်တည်း တီးတတ်ဖို့ လိုချင်လိုမယ်၊
နားတစ်ဘက်တည်း နားထောင်ဖို့ လိုချင်လိုမယ်၊ ဆက်လျှောက်
အစစ်တွေ ဆာလောင်ရင် အချစ်တွေ လောင်ကျွမ်းတတ်တယ်ကွ၊ ဆက်လျှောက်
ဘဝမှာ ရာထူးဆိုတာ ရူးတာ၊ ငါ့မိန်းမနဲ့ငါ ဒီကိစ္စနဲ့ မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေးခဲ့ရ
ဆင်းရဲမွဲတေ ကျွမ်းလောင်ပြာကျ ကွန်းခိုဖို့ ဗိမာန်မရှိတော့ဘူး ...ဖရိုဖရဲ
ကျစရာမျက်ရည်လည်း မရှိတော့၊ ဟေ့ကောင် ... အတွေ့အကြုံအရ ငါ့ကို သွေးတိုးလာမစမ်းနဲ့
ရည်ရွယ်ချက် နှစ်ပက်သုံးပက်လောက် ဆက်ထည့်ပေးဦး
ဒါ ငါ့လွတ်လပ်ခွင့်ကွ၊ ကဗျာကို အိုးပစ်အိမ်ပစ် ချစ်ခဲ့တာ
အမေလည်း ငါ့အနားမှာ မရှိတော့၊ အဖေလည်း ငါ့အနားမှာ မရှိတော့
ယုတ်စွအဆုံး ငါ့မိန်းမလည်း ငါ့အနားမှာ မရှိတော့ ...သွားပြီ တစ်ခုမှ မရှိတော့ဘူး
ဒါ ငါ့စိတ်လွတ်လပ်ခွင့်၊ လိုအပ်ချက်အတွက် ခရီးဆက်ရမယ်
အခု မန္တလေး ... အခု ရန်ကုန် ...အခု မုံရွာ ...အခု နေပြည်တော်
(ဂမာန်ကြီး ငါ့ကို လမ်းစရိတ်တော့ မစလိုက်ဦး)
စကြဝဠာကို ထိုးဖောက်မယ်၊ တီကောင်လို ကမ္ဘာမြေကို ထွန်ယက်မယ်
ကဗျာမီးရှူးမီးပန်းလွှတ်ချင်လွှတ်မယ်၊ ငြင်းမယ် ခုန်မယ်
နီယိုမော်ဒန်၊ ကျူဗစ်ဇင်၊ ဆာရီယယ်လစ်ဇင်၊ ဒိုင်ယာလက်တစ်
ဟေ့ ပြောရင်းဆိုရင်း မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ ပကတိတရားတွေလည်း အာကာသဆန်လာပြီ
လူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေလည်း အရေပြား ဆန်လာပြီ
ဘဝဆိုတာ အစက်အပျောက်တစ်ခုပဲ၊ ဒါကြောင့် သေခြင်းတရားလောက် မွန်မြတ်တာ ဘာမှမရှိ
မသေခင် ကဗျာလမ်းသစ်တစ်ခုရဖို့ ချုံတွေကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းရမယ်
လူငယ်ကဗျာဆရာပီပီ လူငယ်ကဗျာသွေးကို ပြကြပါ
ရင်ချင်းအပ်စရာ မလိုဘူး ...ကျောချင်းကပ်ထားလည်း အမှန်တရား
ပြောစရာ စကား ဒီမှာတင် တစ်ခန်းရပ် ...မနက်ဖြန်ဆက်မယ်
ဒီည ငါ အရမ်းလန်းသွားပြီ
ဒီဝိုင်းကို မင်းတို့ပဲ ကြည့်ရှင်းလိုက်ကြ
မာန်ကြီး = မာန်ထက်သာ
အောင်ရင်ငြိမ်းကို ၂၀ဝ၃ ခုနှစ် အလယ်လောက်မှာ စတင်ရင်းနှီးခဲ့တယ်။ အဓိကက
မြစ်ခွဲကိုးစင်းက စီစဉ်ခဲ့တဲ့ ၄-ယောက် ကဗျာစာအုပ်အတွက် ရန်ကုန်
၃၄ လမ်း အပေါ်ထိပ်ကဆိုင်မှာ ထိုင်ပြောရင်း ရင်းနှီးခဲ့ကြတာ။
သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဘားဆိုင်မှာထိုင်တိုင်း သူက သူရေးဆွဲမယ့်ပရိုဂရမ်အသစ်
အမြဲ ချပြတတ်တယ်။ ကျန်သူတွေနဲ့ စကားအခြေအတင် ပြဿနာဖြစ်တိုင်း ကျွန်တော်က
ကြားကနေ ဘီလူးဆိုင်းတီးရတယ်။အဲလိုဆိုတော့လည်း ငြိမ်ကျသွားရော။
တစ်ခါတရံ သူငယ်ချင်းတွေကို ကဗျာသစ်ရှာပုံတော်ကိစ္စ အကူအညီတောင်းပေမယ့်
သူကိုယ်တိုင် ပြီးစီးပြီးသားလေ။ သူ့လေသံအတိုင်း ရေးထားတာ။ နားလည်မှု
လွဲမှားနိုင်တဲ့ တချို့စကားလုံးတွေပါရင်လည်း ကျွန်တော့်ကို ဖြည့်စွက်နားလည်ပေးပါဦး။
အာရုံကို လမ်းတွေပေါ် ပစ်ချထားလိုက်တယ်။
ဆာလောင်မှုဟာ ညကြီးသန်းခေါင် ထထအူရတယ်။
ခင်ဗျားတို့ ကျပျောက်သွားတဲ့ ကစားကွင်းတစ်ခု။
အသံများနဲ့ လမ်းတွေဟာ အမှန်တကယ် တည်ရှိခဲ့ပါတယ်။
သစ်ပင်တွေ နောက်တစ်ဖန် အရွက်ပြန်ဝေနိုင်ဦးမလား
ဒီထက်ပို မကြားနိုင်တော့ဘူးလား။ ။
မနော်(မနော်ဟရီ)အတွက် ရေးလိုက်ရတဲ့ ကိုတာရာမင်းဝေအမှတ်တရကဗျာတစ်ပုဒ်ပါ။
အခု သူ့ Blog မှာ တင်ထားတယ်တဲ့။
သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပေမယ့် စာဖတ်သူကြည့်မြင်တတ်ရင်ပဲ ကျေနပ်နေပါတယ်။
သင်ခန်းစာကို တစ်က ပြန်စနေရ
ဘဝကို ဆက်လက် ညာနေရ။
စိတ်ကို ဆုပ်နယ်နေတဲ့ လက်သီးတွေ
မျက်ရည်တစ်စက် တောက်ခနဲ ကျသွားတယ်။ ။
"အဝေးက အငေး" ကဗျာရေးပြီး အရှိန်မသေသေးတဲ့ ခံစားမှုကြောင့် ဒီကဗျာတိုလေး
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ ကျနေတဲ့ မျက်ရည်စက်တွေဟာ ဓားသွားတွေပေါ်မှာ။
ရှင်နေဆဲအသက်ကို သရဏဂုံ တင်နေရ။ ။
နာဂစ် တစ်နှစ်ပြည့်တုန်းက ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာပါ။ သီသန့်သိမ်းထားတဲ့ အရာပါ။
"ကြည်ဇော်အေးနဲ့ မပြောဖြစ်တဲ့ စကားလုံးများ"
လူငယ်ဆိုတော့ အမှားအယွင်းတော့ နည်းနည်းပါးပါးရှိမှာပေါ့
ဟုတ်တော့လည်းဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ချင်လည်း မဟုတ်ဘူး
မင်းက မင်း အိပ်မက်အကြောင်းပဲ ထပ်တလဲလဲ ပြောနေ
ခါးသီးတဲ့ အတွေ့အကြုံတိုင်း ဘဝဟုတ်လို့လား
"ငါက ဒီကဗျာကို ခံစားချက်နဲ့ ရေးတာကွ" လို့ ခံယူချက်တွေ စွတ်ပြောဦးမလား
ဘာပဲပြောပြော ရေဆာရင်တော့ ရေသောက်ရမှာပဲ
ကျန်းမာကြံခိုင် ဒို့မဏ္ဍိုင်ဖြစ်ဖို့ မှန်မှန်အိပ်၊ မှန်မှန်စား
အောက်ဆီဂျင်ကို တဝရှူ (အဆင်ပြေတာ ဒါပဲရှိတယ်)
ပြေလည်စရာရှိရင် ပြေလည်သွားဖို့ တစ်ခုပါပဲ
ဟန်ကိုယ့်ဖို့ဆိုတိုင်း မွဲပြာကျသွားအောင်ထိတော့ ဟန်မနေနဲ့ကိုယ့်လူ
ဟန်းဖုန်းတွေဈေးကျလည်း သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန် တန်ရုံပဲပေါ့
စကားကို အကျယ်ကြီး သိပ်မပြောနဲ့၊ အစားကို တဝကြီး သိပ်မစားနဲ့
လူကူးမျဉ်းကြားက လျှောက်ဖို့လည်း မမေ့နဲ့
ဘာတဲ့ မီးနီးပြရင် ငိုချင်တယ် ဟုတ်လား
စကားလုံးတွေ မိုင် ၁၅၀ နှုန်းတိုက်ခတ်ရင် ကြောက်လန့်နေတယ် ဟုတ်လား
တို့တတွေက မရင့်ကျက်သေးရင် ငယ်သေးတာပေါ့ကွာ
ထားလိုက်စမ်းပါ၊ မင်းပြောပြောနေတဲ့ ဒီပလိုမင်စီတွေ နားထားစမ်းပါ
ထားလိုက်စမ်းပါ၊ မင်းရွတ်ရွတ်နေတဲ့ သမိုင်းရေးရာ အဖြာဖြာတွေ ရပ်လိုက်စမ်းပါ
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့၊ မိဘဆီက လက်ဖြန့်ရင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့
ကမ်းနားသစ်ပင်ဆိုတာ ပြိုလဲချင်လို့ ကမ်းနားသစ်ပင်ဖြစ်တာတစ်ခုပဲ ရှိတယ်
ငါ့မြင်းငါစိုင်း စစ်ကိုင်းလည်း မသွားချင်နဲ့
ငါ့လှေငါထိုး ပဲခူးလည်း မရောက်ချင်နဲ့
တစ်နေ့တစ်လံနဲ့ ပုဂံလို ပြေးနေရတာပဲ မဟုတ်လား ကိုယ့်လူ။
ကြည်ဇော်အေးနဲ့က မုံရွာမှာ ရှင်သန်ကြီးထွားသူချင်းဆိုတော့ သူတစ်ပြန်၊
ကိုယ်တစ်ပြန် ပြောမနာ ဆိုမနာတွေပါပဲ။ ဘာကြောင့် ပြောမနာ ဆိုမနာလဲဆိုရင်
သူနဲ့ကျွန်တော်က မကျေနပ်ရင် ဘာစကားမှ ပြောစရာမလိုဘဲ
လက်အရင်ပါတတ်လို့ပါပဲ။ အခုအချိန်ထိ ကျွန်တော့်နဖူးမှာ သူထိုးခဲ့တဲ့
နှုတ်ခမ်းမှာလည်း ကျွန်တော်ထိုးခဲ့တဲ့ စုတ်ပြတ်ရာအမာရွတ် ရှိနေတယ်လေ။
ဝစီပိတ်နောင်ဂျိန်ကျင့်စဉ်မှာ သူနဲ့ကျွန်တော်ကို ဘယ်ကဗျာဆရာမှ
သူငယ်ချင်းများထံ ကဗျာတွေ ရေးပို့လိုက်ပါတယ်။
ညည ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပါရဲ့လား။ ။
ကဗျာတွေ မရေးဖြစ်ပေမယ့် ခံစားချက်တွေကို ခြောက်နှစ်ကျော်
ထမ်းပိုးခဲ့ရပါတယ်။ ကဗျာရေးဖြစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း သူတို့လည်း
ငါ့လိုခံစားမှုတွေ ရှိမှာပဲဆိုပြီး ချရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ယခုဖတ်နေသူ
Posted by MANORHARY at 12:09 AM 1 comments
ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိသေးတဲ့ မောင်ချောနွယ်ရဲ့ကဗျာရှည်အသစ်စက်စက်ပါ။ သူငယ်ချင်း တင်မင်းထက်ရဲ့ ရွှေဝါပြည် ကနေ ကူးလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တခြားရှားပါးစာတွေလည်း အများကြီး တွေ့နိုင်တာမို့ အဲဒီမှာလည်း သွားဖတ်နိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါတယ်။
"ဒိုင်း" ကနဲ မိုးပေါ်ပျံတက်
"ဒိုင်း" ကနဲ ချောက်ထဲပြုတ်ကျ
အို ... အိစက်ညက်ညော
ဘုရား ... ဘုရား .....
ဘုရား ... ဘုရား ...
"လယ်ထွန်သွား နွားမေ့" ဆိုစကား
သည်မှာ မေ့ကျန်မယ့်ကောင်ပါကွယ် ...
အဲဒါက ... ကွန်တဲ့လား
တစ်လုံးချင်း ခုတ်မောင်းနေတယ် ...
မင့်နာမည် ... ကလေး ခေါ်နေလိုက်လို့
ချစ် ... ချက် ... ချောက်
သင်းကလေး ပေါင်သားပေါ်အိလို့ ...
ပျက်ကျရ လေယာဉ်တစ်စီးပေါ့ ...
ငါ့အသည်း ပလုပ်တုတ်ဖြစ်ပုံရှုမျှော်ခင်းကလေးပေါ့ ...
"ဖိတ်စာ ... ပါ"
ဘဝတစ်လျှောက်လုံးလောက် ချစ်မှားယွင်းသင့်တာပေါ့ ...
"အင်ထရိုပီ" တွေ မြင့်ကုန်ရပါပြီကွယ် ...
အို ... ဘာဖြစ်လို့များ
ငါ့မှာအူတွေ အထပ်ထပ်ယားလို့ ...
၁၅၀ဝ လေ ...
တဝကြီး သင်းကလေးနဲ့ ...
နပိုလီယံဟာ ကျဆုံးခဲ့တယ်မှုတ်လား ...
မင်းကလေးဟာ လမင်းအသစ်ပါကွယ် ...
အို ... အသည်းခွဲစက်ကလေးရဲ့
ဟောဟို ... နေအောက်မှာ
သည်မှာ ... ပြောလိုက်မယ်
သင်း တို့သိသွားစေရမယ် ...
သိကြ ... သိကြ
ဝင်းပပါ ... ဝင်းပပါ
အိုး ... တိတ်တခိုးကြီးပါလားကွယ်
မှတ်လိုက်ကြပါတော့ကွာ ... ... ... ...။
Posted by MANORHARY at 4:01 AM5comments
ဘဝမှာ တစ္ဆေတစ်ကောင် မဖြစ်ခဲ့တာကိုပဲ နို့တစ်စက်စာမျှ ချွေးသိပ်ခွင့်ပြုပါ မေမေရယ်
လူ့အဖြစ်ကို အသားကျအောင် မစီးနိုင်သေးသမျှတော့
ဇက်ကုန်ဖွင့်မိုက်ရတော့မယ့် ရာသီဥတုကလည်း သဲနဲ့တရှပ်ရှပ်
ခေါ်သံမှာ ငါ့ထံပြန်မလာသူ ပဲ့တင်ရေ . . .
ကိုယ့်အမြီး ကိုယ်ပြန်မြိုထားရတဲ့ မြွေတစ်ကောင်ဆိုရင်တောင်
ကရွတ်ကင်းလျောက် ပုလွေသံတွေနဲ့တော့ အာပတ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး
ခုတော့ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာရှာနေရတဲ့ ကြိုးတန်းလမ်းလျှောက်မီးလောင်ပြင်ထဲ
အသားတုံးသာသာ လူစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ။
တပူပူ တကျီကျီဖြစ်နေတဲ့ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်အတွက်
ပတ္တမြားကွဲ့ ပတ္တမြားလို့ နှင်းခဲ့တဲ့အရာဟာ
ဗိုလ်ချုပ်ပုံလွှာနဲ့ မတ်စေ့ကလေးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ် . . .
ဒါ ... သားရဲ့အိမ်တော်ရာလို့ ဆိုတဲ့ အရာဟာ
ရဟန္တာတစ်ပါး သီတင်းမွေ့နေတဲ့ ငွေသားကြုတ်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်
ကဲကွယ် ... ဒါ ...သားရဲ့ဇနီးပေါ့လို့ ပေးခဲ့တဲ့အရာဟာ
မျိုးကောင်းရိုးကောင်း တိုက်ကြက်မကလေးလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်
မသဒ္ဓါရေစာ ဝန်ပိုးတွေမှ မဟုတ်ဘဲ
သာမန်ညောင်ည ဝန်ထုပ်တွေမှ မဟုတ်ဘဲ
ဖက်လဲတကင်းနွေးကြည်တဲ့ ဥတုပျိုလေးနဲ့ နမ်းမှ
အသေအချာနိုးလာတော့မယ့် "ခမဲ"။ ။
လမ်းမဟုတ်တဲ့ လမ်းတွေမှာလည်း ပြေးခဲ့ဖူးပြီ။
ဥယျာဉ်မဟုတ်တဲ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာလည်း ခုံတန်းပြာလိုကျင့်ခဲ့ဖူးပြီ။
ဆိုညည်းမိတဲ့ သီချင်းမှာ မသေချာမှုတွေသာလည်ချောင်းထဲဘောင်ဘင်ခတ်လို့
မှတ်တိုင်ဟာ လေထဲမိုးထဲ သွေးတောင်အောင်ရပ်စောင့်နေရပါပေါ့။
ဒီနေ့ထိလူဖြစ်ကျိုးနပ်ခဲ့တဲ့ နာရီပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိခဲ့သလဲ
လူဖြစ်ရှုံးခဲ့တဲ့ နေ့ပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိခဲ့သလဲ
လက်ပြန်ရိုက်ချလိုက်တဲ့ မေးခွန်းမှာစံပယ်တွေ ဖွေးဖွေးလှုပ်အောင်ကြွေပေါ့။
အချစ်တေးတွေ သီဆိုရဦးမယ်။ ။
"ငါမဟုတ်ဘူးကွဲ့၊ ဇီဝဇိုး၊ ငှက်တစ်ကောင်"
ရယ်ဒီ ရိုက်မယ်၊ ပြုံးပါတဲ့
အဝတ်မည်းကြီး ခြုံထားသူ ညွှန်ကြားသမျှ
သွားအကျဲသားလေးနဲ့ရယ်ခဲ့ ... ။
သည်းသည်းမည်းမည်းနစ်မွန်းပစ်ချင် ... ပစ်လိုက်
"မြကျွန်းသာ" သဏ္ဍာတိုက်ရဲ့ မြေပုံညွှန်း
ဟုတ်ကဲ့ ... လုံးလုံးမသုံးဖြစ်တော့ဘူးလေ ... ။
သွေးမျှင် သွေးစ၊ ပါတဲ့အထိ၊ အန်ထုတ်
တရိပ် ... ရိပ် ... ပျံ
အန်ပြီးရင်း အန်ရင်း ... ပေါ့။ ။
တစ်ကိုက်ဖဲ့စားလိုက်တိုင်း ခွမ်ကနဲ ခွမ်ကနဲ မာလကာသီးကြီးတွေ အုန်းသီးခန့်
အုန်းသီးမှာ အခွံမရှိတော့တဲ့ ငါတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီနေ့နည်းပညာ ...
ငါ့ကျောင်းက ကလေးတွေဟာ အင်တာနက်နဲ့ မလုံလောက်တော့
ပဋိပညာရေး anti-education ကို တောင်းဆိုနေပြီ
ိုမုန့်စားဆင်းချိန်မှာ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးလို့ ...
ငါတို့လမ်းထဲက အိမ်တွေဟာ ရွှေဖြူမျက်နှာကြက်နဲ့
လေးထပ်မြင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် mart တစ်ခုကို ဦးစီးရောင်းချလို့
နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေဟာ ပလူပျံလို့ ...
စက်ရုံက မီးခိုးတွေနဲ့ အိတ်ဇောငွေ့တွေကို
မြို့တော်ဝန်ဟာ အောက်စီဂျင်အဖြစ် ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်လို့
မြို့ထဲက ပလက်ဖောင်းတွေ၊ ပလက်ဖောင်းတွေရဲ့ ပခုံးသားမှာ
သင် လျှောက်ခဲ့တဲ့ခြေလှမ်းတွေကို ဖော်ပြလို့
ပဲစပါးပြတိုက်၊ ရေချိုးငါးပြတိုက်၊ ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက်ကြီးတွေဟာ မိုးထိမြင့်လို့
လမ်းထောင့်တိုင်းမှာ သူရဲကောင်းနဲ့ စာဆိုတို့ရဲ့ကြေးသွန်းရုပ်ကြီးတွေ
မြို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသော လေယာဉ်ကွင်းကနေ ...
တကယ့်အဖြစ်အပျက်များသာ တွေ့ရမှာ။ ။
သုည တစ် သုည တစ် သုည တစ် ဓာတ်ခဲနဲ့အသက်ရှု
ဘာကို မြင်ကြရ။ ။
ထူးဆန်းသိမ်မွေ့တဲ့ လေပြည်လေညင်းတွေကို ခြယ်မှုန်းပေးကြတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ အခန်းတစ်ခု မရှိခဲ့ပါ။
လိုအင်ဆန္ဒများနှင့် ရှုပ်ပွနေသော ကောင်းကင်တစ်ခုသာ
လုံခြုံနွေးထွေးပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အခန်းတစ်ခုကို
အခန်းတစ်ခုကို ကျွန်တော် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါရဲ့။
ခေတ္တခဏသာ စိတ်သက်သာရာ ရစေခဲ့ပြီး
ကျွန်တော် ချုပ်လုပ်ထားတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုကိုလည်း
ကျွန်တော် မသိအောင် ပြန်ထွက်သွားခဲ့လေတယ်။ ။
ဘတ်စ်မှတ်တိုင်၊ စူးစမ်းကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံ၊ မြင်ကွင်းထဲ
မျက်နှာတွေ တရိပ်ရိပ် ဖြတ်သွားနေ၊ ကောင်မလေးက
ကောင်လေးကို ချစ်စနိုး မျက်လွှာပင့်ကြည့်တဲ့ ခဏ၊ လူအိုတစ်ယောက်ရဲ့
မျက်မှန်နက်အောက်မှာ ဘာရှိသလဲ၊ နားကြပ်ထဲက သီချင်းသံနားစွင့်နေတဲ့ မျက်နှာ
အများပြည်သူသုံးဖုန်းပြောရင်း စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ အိပ်မက်ထဲ လမ်းလျှောက် နေတဲ့
အခြားမျက်နှာပေါ်မှာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု အရိပ်အယောင
်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမျက်နှာနဲ့ မိန်းမရွယ် ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးကို ထီမထင်ဟန်နဲ့
ငွေကြေးရှာဖွေနေတဲ့ မျက်လုံးတွေ၊ ထိုင်ခုံပြာပေါ် တောင့်တောင့်ကြီး
လူမှုရေးပြောနေတဲ့ မျက်နှာတွေ ရှုပ်ထွေး/မှိန်ဖျော့
ဒေါ်လာတန်ဖိုး အနိမ့်အမြင့်မှာ ပျက်ယွင်းနေတဲ့မျက်နှာတွေ ငွေစက္ကူလို
ဖျတ်ခနဲ၊ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကို မမြင်ဟန်ဆောင်လိုက်တဲ့မျက်နှာ၊ ကြော်ငြာ
ဆိုင်းဘုတ်ပေါ်က အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုကို ဆာလောင်နေပုံရတဲ့သရုပ်ဆောင်မှု
စိတ်ကူးထဲက မျက်နှာပုံရိပ်တွေက မှုန်ဝါးနေသလိုပဲ၊ အမှန်လို့တော့ မသေချာ
နေ့စဉ် ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းနေရသလား၊ ဟိုမျက်နှာ
လူ့ဘဝဟာ ပန်းသီးလို အရသာမျိုးရှိတယ်လို့ ယူဆထားသလား၊ ဒီမျက်နှာ
မျက်နှာပေါ်က အဓိပ္ပာယ်တွေ ကွဲပြားခြားနား၊ သို့သော် အကန့်အသတ်နဲ့
အများနဲ့မတူတဲ့မျက်နှာတစ်ခု၊ စကားလုံးတွေ စဉ်းစားကြည့်နေဟန်
ဘာသာစကားမှာလည်း အဓိပ္ပာယ်ဟာ အကန့်အသတ်နဲ့
တိရစ္ဆာန်ပုံပေါက်နေတဲ့ မျက်နှာကို လူကြီးလူကောင်းလို့ အနက်ဖွင့်လို့ ရမရ
အခု မြင်နေရတဲ့ မျက်နှာတွေမှာ အခြားမျက်နှာတွေ အစားထိုးလို့ ရမရ
မီးတောက်မီးလျှံ၊ ပင့်ကူ၊ ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ စကားပုံ၊ ရေဆေးပန်းချီကား
ခေတ်ကုန်သွားတဲ့ ဖက်ရှင်၊ ပညာတတ်မျက်မှန်၊ ဝက်နှာခေါင်း၊ စက်ရုပ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ
ဘာသာပြန်သူ၊ တက္ကစီမောင်းသူ၊ ငွေလွှဲစာပေးပို့နေသူ၊
အရေးပေါ်၊ ကွန်ပျူတာက ပြောနေတယ်၊ အချက်ပေးအော်မြည်သံ
အမှောင်ထဲမှာဝိုးတဝါး၊ လူလူချင်း ခြောက်လှန့်နေတဲ့တစ္ဆေ
ခင်ဗျား၊ ကျွန်တော်၊ သူသူငါငါ။ ။
တအိအိ တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေရတာ သူ့ခန္ဓာ။
အရသာကို ရသလောက် ပိပိရိရိခံစား
နာရီတစ်လုံးကတော့ ဖျားနေခဲ့ပြီ။ ။
မင်စွန်းနေတဲ့ အင်္ကျီကိုကြည့်ပြီး လွမ်းရမလား
တစ်ရက်ခြား တစ်ကြိမ်ပွင့်တဲ့ ဇွန်ပန်းရုံကို လွမ်းရမလား
လမ်းဘေးက ဓာတ်တိုင်ကြီးကိုတော့ ပြောပြခဲ့ဖူးတယ်။.
တူတူပုန်းတမ်း ကစားခဲ့ဖူးတယ်။ ။
မမြင်ရတာကြာသော မိတ်ဆွေတွေလည်း စကားပွင့်စိမ်းစိမ်းတွေနဲ့
ခင်ဗျားတို့ လက်ထဲမှာ အလင်္ကာတွေ နိမိတ်ပုံတွေ
အပစ်အခတ် အဖြတ်အတောက် အချိန်းအချက်
ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ပီမိုးနင်းလမ်း၊ ရွှေဥဒေါင်းလမ်း၊ မြို့မငြိမ်းလမ်း
လိုချင်တာရနိုင်မယ့် မြို့တော်မတ်နဲ့ ဆိုက်ဘာကဖေး၊ ကဗျာကလေးရေး
အညောင်းအညာလေးလည်း ဖြေချင်ရင် ပြေနိုင်တာပေါ့၊
အကြံပြောင်းတဲ့အကြောင်းပြန်စကား ဖုန်းလိုင်းတွေ မအားသေးဘူးလေ
ရင်ငွေ့လေးပြေးပြေးလှုံရ ...နို့သက်လေး ပြေးပြေးခံရ
ကဗျာဆရာတစ်ယောက်တော့ ရှိသင့်ပါတယ်။ ။
အလွမ်းက ငါ့ကို စောင့်တယ်
ဒီသီချင်းကို မောင်ဒေါင်းလည်း ဆိုတယ
ငယ်သူငယ်ချင်းမလေး ယုယုလွင်လည်း ဆိုတယ်
ချေ လည်း ဆိုတယ်
မတရားတာကို ဘာစောင့်ပါလိမ့် မိတ်ဆွေတို့
ရာသီက ပန်းကို စောင့်တယ်
ငါတို့ဟာ စကားတွေ ပြောကြရတယ်
ကရားထဲက ရေကျသလို စကားတွေက
အမှားထဲက ရွှေတွေ့သလို တရားတွေအကြောင်း
ပွင့်ဖူးရမယ်ဆိုတာ သေချာခဲ့ပြီ။ ။
ပြုံးရယ်တတ်ဖို့ ကြိုးစားကြရအောင်။ ။
ကြွေးသစ်ပါ ဆက်တင်နေတဲ့ ကျွန်တော်
ဖေဖေ ကရုဏာဒေါသနဲ့ ကျွန်တော့်မာနကြားမှာ
ကြီးလာတော့ ပိုထင်ရှားတယ်ဆိုတာ ဟုတ်တယ်။
မိသားစုအရသာကို ငတ်မွတ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်တယ်။
ဖေဖေ့ အမေ ကျွန်တော့်အဘွား
ကျွန်တော့်အပေါ် ဖေဖေ ပိုချစ်ခဲ့တယ်လား။
အပေါ်သွေး (၁၉၀)၊ အောက်သွေး (၁၀ဝ)
စဉ်းစားတိုင်း ဝဲခဲ့တဲ့ မျက်ရည်နဲ့
ဖေဖေ့အိမ်က မြေကြီးရနံ့ကို ဆာတဲ့စိတ်နဲ့
ဒီကဗျာမှာ ကျွန်တော်တီးနေတဲ့ ဟွန်းသံ။ ။
အမှန်တရားက ဖိနပ်ပြင်နေချိန်မှာ အမှားက ကမ္ဘာတစ်ပတ်ပြည့်ခဲ့တာလား
သူတော်စင်က ပုတီးတစ်ပတ်ပြည့်ချိန် သူမိုက်က ငိုက်မြည်းနေတုန်းလား
တစ်ယောက်က အခွန်း (၆၀) ဆရာခေါ်မှ
တစ်ယောက်က တစ်ခွန်းပဲ ပြန်ထူးတာလား
နံနက်ခင်းပွင့်တဲ့ ပန်းကအစ ဆုံလည်နွား
ကိုယ် ဒီနေရာ ပြန်ပြန်ရောက်လာတာ
ရောက်ချင်ပေမယ့် မရောက်သေးတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာအတွက်
မရောက်ချင်ပေမယ့် ရောက်လာဦးမယ့် တစ်စုံတစ်ရာအတွက်
မွေးနေ့ဟာ လောကမာယာနောက်တစ်ခွက်လား။ ။
ငါနဲ့မင်း အခုလို တွေ့ဆုံခြင်းကိုက
ဒန်းလေးတစ်စီးပေါ် ကျွန်မ ရောက်နေလောက်ပြီ
ငါ့ကိုလည်း ဘဏ်တိုက်တစ်ခုထဲမှာ တွေ့ကြတယ်ပြောတယ်
ငါ့အတွက် မင်းမရှိလည်း ရတယ်
ကျွန်မလည်း ရှင့်ကို အလိုမရှိတော့ဘူး
ရှင့်ရဲ့မထုံတတ်တေးကို စိတ်ပျက်မိတာတော့ အမှန်ပဲ
စက်ရုံတစ်ရုံ၊ အိမ်တစ်လုံး၊ မိန်းမတစ်ယောက်
အမြဲပြုပြင်ဖို့ လိုသေးတယ်ဆိုတာ ရှင်မသိတာအံ့ပါရဲ့
နွေပြီးရင် ... မိုး လာတော့မယ် ...
မိုးပြီးရင် ... ဆောင်းရောက်တော့မှာလို ...
အဲဒီလို မင်းအတွက် ငါ့မှာ အဆင်သင့်မရှိခဲ့ဘူး
မင်း Mr. LP ကို သိလား
ကျွန်မ အရူးတွေအကြောင်း စိတ်မဝင်စားဘူး
ငါကတော့ တစ်ယောက်ကို စောင့်ရဦးမယ်
သွားပါ ... သွားလို့ရပါပြီ
သေသူကိုရှင်သူက တ စရာအကြောင်းလည်း မရှိ
မင်းလိုပဲ ငါက ပြန်ပြီး အနီရောင်ကြက်ခြေခတ်ပေးရမယ်
ဗုဒ္ဓဟူး ... တဟူးဟူးရောက်ပြီလေ
ငါတို့ လှည့်လို့မရတဲ့ လှိုဏ်ခေါင်းကျဉ်းထဲရောက်နေကြပြီလေ
အံ့ဩ ထင်မထား ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့
ဒေါင်းလမ်းထဲက သီချင်းမဖွင့်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ။ ။
ကျေးဇူးဆိုတာကို ဘာဝနာတစ်ခုလို ပွားများသင့်တာပေါ့။
ကျေးဇူးရှင်ကို စော်ကားကြတဲ့ လူမိုက်တွေကြောင့်ပါပဲ
ကျေးဇူးရှိတယ်လို့ ကိုယ်တိုင်က တဖွဖွပြောပြီး
ကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးလိုက်မိတဲ့ ဒီကဗျာ
ကျေးဇူးများခဲ့ပါရဲ့ ။ ။
အနာပေါ် တုတ်ကျတာလည်း အရသာ
နာကျင်စရာတွေများတော့ နာကျင်ခြင်းဟာလည်း အရသာဖြစ်လာ
တစ်စစီဖဲ့ခြွေချ ကျောက်တောင်ကြီးက ခြတောင်ပို့သာသာ
"ကြိမ်နဲ့ရိုက်ပြီး ထွက်စေခဲ့တဲ့သွေးစက်တိုင်းကို ဓားနဲ့ပိုင်းလို့ထွက်ကျလာတဲ့
သွေးစက်တွေနဲ့ပေးဆပ်ပြီးတဲ့အထိ အဲဒီစစ်ပွဲကြီး ဆက်ဖြစ်နေစေဦးမယ်ဆိုရင်"
အနာမကျက်သေးတဲ့ကမ္ဘာဟာ နောက်တစ်ကြိမ်ဒဏ်ရာကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါ့မလား
ဟီရိုရှီးမားအတွက် မျက်ရည်တွေ မခမ်းခြောက်မီ
ကာဝါနာစကီအတွက် မျက်ရည်တွေ မခမ်းခြောက်မီ
ကမ္ဘာကြီးအတွက် လက်သီးပုန်းထဲက စိုးရိမ်ရတာလည်း ရယ်စရာ
ကျပ်ညှပ်နေတဲ့ ဘတ်စ်ကားထဲက တစ်ယောက်စာအသက်ပိုရှုရတာလည်း
"ရှင့်ကိုယ်ရှင်ဂရုစိုက်ပါ၊ ဘာအတွက်မှ မစိုးရိမ်ရ"
လေပေါ်ဝဲနေတဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေကြည့် အသက်ရှုကျပ်နေတဲ့ကဗျာဆရာ
ကိုယ့်အိမ်ခေါင်မိုး ကိုယ်မဖာနိုင်ဘဲ အိုဇုန်းလွှာကို တက်ဖာပစ်ရမယ်တဲ့
နောက်တီးနောက်တောက် ကဗျာ။ ။
"ပျော်နေချိန်မှာ သေရတာ" ဆိုတဲ့
အားလုံးဟာ စုတ်တသပ်သပ်။ ။
အလေအလွင့်ရှိ မရှိ စစ်ဆေး ...
ကိုယ့်အိမ်နဘေးက စိုက်ခင်းတွေ ငဲ့ကြည့်
ဖွံ့လို့ ... ထွားလို့
ကမ်းနဖူးမှာ အလွမ်းငင်နေမိ။ ။
ကင်မရာကို ရဲရဲကြည့် ...
ကုရာနတ္ထိ ဆေးမရှိပါလား" ဆိုပြီး
မဟုတ်သေးပါဘူး ... ဒါတွေကို
မမှန်ရင် မမှန်ဘူး အရဲစွန့်ပြော
"ဖျတ်"... ။ ။
ခေါင်းငိုက်စိုက်ချဖို့ ဘယ်တော့မှ မဟုတ်ဘူးလေ ...
အသွားအလာ အထားအသို ခဏခဏမှားတယ်
ကဗျာတွေနဲ့ ပိုပိုဝေးသွားတယ်လို့ ကဗျာက ခံစားရ
ရှုမျှော်ခင်းတွေ မြင်ရဖို့ သက်သက်နဲ့တော့
ဗလာ၊ ဝေ၀ါး၊ ဟင်းလင်းပွင့်ထွက်လို့
ကဗျာပို့လိုက်တဲ့ Massage တွေက
ကဗျာနဲ့ ပိုဝေးသွားသလို ခံစားနေရ
CD နောက်တစ်ချပ် ပြောင်းလိုက်ရုံတင်ပဲ။ ။
ဟင်္သာတစ်ကောင် မမြင်ရတဲ့ ဟင်္သာတ။
သံယောဇဉ်အထပ်ထပ်၊ တာတွေလို ရစ်ပတ်မွန်းကြပ်ပေါ့။
ချောင်းကောလေးက ချောကောင်းတုန်းလားကွယ့်။ ။
ချွတ်ချော်မှုကြောင့် ရေမျောကမ်းတင် ဖြစ်ရတဲ့အခါ
ပျံသန်းသွားတဲ့ ငှက်တွေကို မော့ကြည့်ရ
ထမ်းထားရတဲ့ လူ့အဖြစ်ကတော့ ဒီဓာတ်ပြားပဲ။
ငါတို့ တစ်ခုခုကို ငြင်းပယ်ရတော့မယ်။ ။
Posted by MANORHARY at 6:33 AM2comments